.“မမအထာ” သီချင်းလေးက ပြည်တွင်းမှာသာမကပဲ ပြည်ပမှာပါလူကြိုက်များနေကြောင်းနိုင်ငံခြားသူလေးရဲ့ Tik Tok နဲ့တကွ ပြသလာတဲ့ ရတနာမိုင်. – Askstyle
.“မမအထာ” သီချင်းလေးက ပြည်တွင်းမှာသာမကပဲ ပြည်ပမှာပါလူကြိုက်များနေကြောင်းနိုင်ငံခြားသူလေးရဲ့ Tik Tok နဲ့တကွ ပြသလာတဲ့ ရတနာမိုင်.
ျပီးခဲ့တဲ့လပိုင္းကမွ “မမအထာ”ဆိုတဲ့ သီခ်င္းေလးကို ထြက္ရိွထားတဲ့ ရတနာမိုင္က ပရိသတ္ေတြရဲ့ အားေပးမႈကို အမ်ားအျပားရရိွပိုင္ဆိုင္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ရတနာမိုင္က သူမရဲ့ “မမအထာ” သီခ်င္းေလးနဲ့ ခ်စ္စရာေကာင္းစြာ Tik Tok ေဆာ့ထားတဲ့ နိုင္ငံျခားသူေလးရဲ့ ဗီဒီယိုကို မွ်ေဝေပးရင္း “ကိုယ္ဆိုထားတဲ့ မမအထာသီခ်င္းေလးနဲ႔ ကထားတာ ခ်စ္လိုက္တာ သူ႔ကို I love the way you dance to my song ! ” ဆိုျပီး ပရိသတ္ေတြၾကည့္ရႈနိုင္ဖို့ မွ်ေဝေပးလာခဲ့ပါတယ္။
ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကမှ “မမအထာ”ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးကို ထွက်ရှိထားတဲ့ ရတနာမိုင်က ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို အများအပြားရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ရတနာမိုင်က သူမရဲ့ “မမအထာ” သီချင်းလေးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းစွာ Tik Tok ဆော့ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးရဲ့ ဗီဒီယိုကို မျှဝေပေးရင်း “ကိုယ်ဆိုထားတဲ့ မမအထာသီချင်းလေးနဲ့ ကထားတာ ချစ်လိုက်တာ သူ့ကို I love the way you dance to my song ! ” ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ မျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ်။